Wararka Dibada: Turkiga Oo Baaraya In La Dilay Suxufi Jamal Khashoggi - News WordPress theme
Ishabaydhaba NewsWARARKAWararka Dibada: Turkiga Oo Baaraya In La Dilay Suxufi Jamal Khashoggi
Wararka Dibada: Turkiga Oo Baaraya In La Dilay Suxufi Jamal Khashoggi
Booliiska Turkiga ayaa sheegay inay baarayaan dilka suxufiga Jamal Khashoggi oo la waayey shan maalmood kahor kadib markii uu booqday Qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbuul, Turkey.
Suxufigan oo kamid ahaa mucaaridka Qoyska Boqortooyada ka talisa Sacuudiga, ayaa u tagay Qunsuliyada Sacuudiga inuu kasoo qaato waraaqo balse waxaa la sheegay in halkaasi ku sugayeen sirdoonka Sacuudiga, illaa iyo hada lama oga meesha uu ku danbeeyey.
Hase yeeshee Sabtidii shalay ayey saraakiil u hadlay Booliiska Turkiga sheegeen inay hada hayaan xog sheegaysa in suxufiga lagu dhex dilay Xarunta Qunsuliyada Sacuudiga ee Istanbuul, kadibna meydkiisa si qarsoodi ah looga saaray xarunta Qunsuliyada, sida ay baahisay wakaalada wararka ee Reuters.
Xog dheeraad ah oo la helayo ayaa sheegaysa in Wafdi ka socda Dowlada Sacuudiga oo ka kooban 15 qof oo aan xogtooda la hayn kasoo degeen magaalada Istanbuul isla maalintii suxufi Jamal Khashoggi la waayey.
Suxufi Jamal Khashoggi oo kamid ahaa muwaadiniinta Sacuudiga ee sida weyn u dhaliila Boqortooyada ayaa Talaadadii la waayey kadib markii uu dokumenti ka doontay Qunsuliyada Sacuudiga ku leedahay magaalada Istanbul oo uu ku noolaa. Waxaana la sheegay inuusan halkaasi dib danbe uga soo bixin.
Haweenayda uu guursan lahaa suxufigan iyo saaxiibadiisa oo banaanka qunsuliyada ku sugayey ayaa sheegay inuusan halkaasi kasoo bixin, waxayna maalmihii lasoo dhaafay diideen inay ka tagaan irida Qunsuliyada Sacuudig.
Saraakiisha Qunsuliyada Sacuudiga ee Istanbuul ayaa ku dooday in Jamal Khashoggi aan la qafaalan isla markaana uu xaruntooda ka tagay kadib markii uu dhameystay hawlihii uu halkaasi u tagay.
Suxufigan Jamal Khashoggi ayaa kamid ahaa muwaadiniinta Sacuudiga ee sida weyn u dhaliila ama wax uga qora Dhaxal-sugaha Boqortooyada Maxamed Bin Salman.